10 qof oo cudurka shubanka ugu geeriyootay degmada Qandala ee gobolka Bari. – Radio Daljir
10 qof oo cudurka shubanka ugu geeriyootay degmada Qandala ee gobolka Bari.
Qandala, Jan 17- Ugu yaraan 10 qof oo iskugu jira carruur iyo dad waaweyn ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday degmada Qandala ee gobolka Bari, waxaana sidoo kale la il-daran cudurkaasi dad gaaraya illaa 20 qof oo kale.
Dadka uu haleelay cudurka shuban biyoodka ee ku sugan degmada Qandala ayaa la tilmaamayaa badankoodu in ay cabbeen biyo aan nadiif ahayn kadibna ay ka qaadeen xanuunka, sida ay sheegeen maamulka degmada Qandala iyo qaar ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee deegaankaasi ka hawlgasha.
Siciid Waabari Maxamed oo ah guddoomiyaha degmada Qandala oo oo waraysi siiyey idaacadda Daljir ayaa sheegay khatarta xanuunkaan shuban biyoodka, in ay tahay mid ay muddaba ka walwalsanaayeen kadib markii roobabkii sanadihii la soo dhaafay ay seejiyeen degmada iyo deegaannada hoos-yimaada biyuhuna ay gabaabsi galeen.
Guddoomiyuhu waxaa uu sheegay, biyaha haatan laga helaa degmada Qandala in ay yihiin kuwa gabaabsi ah caafimaad ahaanna aan dadka u roonayn, taasi oo uu xusay in ay jiraan khataro kala oo caafimaad darro oo soo wajihi kara dadka deggan degmada Qandala ee gobolka Bari.
Dhawr jeer oo hore ayaa qaylo-dhaan xooggan ka timid maamulka degmada Qandala, taasi oo ku saabsanayd khatarta caafimaad darro iyo biyo la?aanta deegaannadaasi ku soo wajahan, waxaana haatan ay maamulka Puntland iyo hay’adaha samafalkaba ka codsadeen in si deg deg ah taakulo caafimaad loola soo gaaro dadka la il-daran xanuunka shuban biyoodka.